Ny toro-hevitra 10 hanatsara ny bilaoginao | Martech Zone
Alahady, Aogositra 13, 2006 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Computer Shopper dia manana lahatsoratra momba izany Manatsara ny bilaoginao. Ilay lahatsoratra dia misy torohevitra vitsivitsy izay ilaina fa mieritreritra aho fa tsy nahazo ny laharam-pahamehany izy ireo ary tsy niresaka ny zava-dehibe rehetra. Tsy nitsaha-nitombo ny fifamoivoizana tao amin'ny bilaogiko tato anatin'ny roa volana lasa izay. Norefesiko tsara ny mpamaky ahy, ny loharanon'ny mpamaky ahy, ary namboariko mifanaraka amin'izany. Nianatra iray taonina aho tato anatin'ny volana vitsivitsy.
Ity ny Tenako Top:
Aza manahy momba ny fijerin'ny bilaoginao. Tsy mitovy hevitra amin'ilay lahatsoratra aho momba an'io. Blaogy maro no tena tsotra, ary ny bilaogy mahafinaritra sasany dia ratsy tarehy tokoa. Ny olona dia manintona ny kalitaon'ny lahatsoratra fa tsy ny fisehoana tsara tarehy. Ny ankanavaka, mazava ho azy, dia raha mitoraka bilaogy momba ny endrika sy sary ianao.
Mametraha sary na sary marobe amin'ny tenanao eo amin'ilay tranonkala. Jereo ny sariko ato amin'ny lohako ary koa ny sariko About pejy. Ny bilaogy dia resaka ifanaovan'ny mpamaky anao. Sarotra ny manao resaka rehefa tsy fantatrao hoe iza no iresahanao!
Aza hadino ny mampiasa rindrambaiko fitorahana bilaogy misy ireto manaraka ireto: trackbacks, ping, rohy, tag, sokajy, permalinks, fanehoan-kevitra, fikarohana, sitemap, fiarovana spam, fikarohana ary RSS. Ianaro ny fomba fampiasana azy rehetra amin'ny fomba mahomby. Mampiasa aho WordPress. Mila plugins kely ho an'ny sasany amin'ireo endri-javatra izy io, saingy tsotra ny mampiasa azy ary tena matanjaka. Raha tokony hampiantrano amin'ny WordPress aho dia nandefa ilay rindrambaiko ary nampiantrano azy - izany fomba izany no hifehezana ny rindrambaiko, data, URL ary dokam-barotra - ary afaka ampanjifaiko araka ny itiavako azy.
Midira amin'ny serivisy iray farafaharatsiny Technorati hampitomboana ny fampahafantarana ny bilaoginao. Fikarohana Folk Technorati amin'ny alàlan'ny fanamarihana mba hahitanao lahatsoratra vakiana.
Rehefa mahita bilaogy iray tena tianao ianao dia apetraho eo amin'ny tranokalanao ny rohy. Jereo ny rohy ato amiko. Aza masiaka ary mangataha ireo mpamaky mankafy ny bilaoginao hametraka rohy mankany aminao. Rehefa mihabe ny tranokala mifandray amin'ny bilaoginao dia hitombo hatrany ny bilaoginao fahefana. Hanatsara ny fametrahana azy ao amin'ny motera fikarohana bilaogy izany.
Manomboha mampiasa mpamaky RSS tsara ary manomboka misoratra anarana amin'ny bilaogy hafa. Misoratra anarana amin'ny 30 eo ho eo aho izao amin'ny fampiasana Mpamaky Google Labs. Izy io dia mitazona izay novakiako ary manana fiasa mahafinaritra vitsivitsy. Maneho hevitra matetika amin'ireo lahatsoratra hafa aho ary mamela rohy hiverina foana amin'ny tranokalako. Raha te-hanoratra lahatsoratra iray manontolo aho fa tsy hanome hevitra dia manome toky foana aho fa hametraka fiverenana mankany amin'ny lahatsoratr'izy ireo.
Mampiasà fitaovana Analytics tsara. Mampiasa aho Google satria sady maimaim-poana no tena tsotra ny ampifandraisina amin'ny WordPress. Nametraka script kely kely fotsiny aho (izay omen'i Google) ao amin'ny diman-dohan'ny lohahevitro ary afaka mandeha aho! Ny fijerena ny anisanao dia hanampy anao hahita ny fomba ahatongavan'ireo mpamaky amin'ny tranokalanao, ny lazan'ny lahatsoratrao, ary inona ny teny karoka mahasarika azy ireo, sns.
Mampiasà fitaovana famahanana. Mampiasa aho FeedPress. Izy io dia manana endri-javatra fanampiny iray taonina miaraka aminy ary mamela anao handrefy ny fampiasana ny fahana anao. Torohevitra iray ihany, aza hadino ny manolo ny lohatenin'ny lohateny RSS anao. Ny ankamaroan'ny fitaovana famandrihana RSS dia mitady an'io rohy io ao amin'ny lohateny fotsiny. Raha tsy soloinao amin'ny alàlan'ny RSS RSS RSS anao io dia tsy ho voasambotrao daholo ireo mpamandrika!
Blog matetika. Miaraka amin'ny bilaogiko dia tsikaritro fa raha manoratra lahatsoratra 1 na 2 isan'andro aho dia mitombo hatrany ireo mpitsidika ahy. Mahaliana tokoa, raha mandingana iray andro aho dia mila 'misambotra' ireo mpitsidika. Raha mandingana ny 2 aho, dia vitsy no very. Tandremo sao manao bilaogy matetika. Nisoratra anarana aho taloha Instapundit, fa ny lahatsoratra fehezan-teny tokana isaky ny minitra vitsy dia nahatonga ahy hitady voa. Nahita fahombiazana lehibe tamin'ny bilaoginy anefa izy. Misy olona mankafy azy io. Heveriko fa ity dia iray amin'ireo zavatra tsy maintsy arahinao ary ho hitanao amin'ny alàlan'ny fitsapana sy hadisoana. Ny antony hafa eto dia ny faharetan'ny fotoana. Hamarino tsara fa rehefa maheno na mahita zavatra amin'ny lohahevitra ianao dia mihetsika haingana araka izay tratra raha tianao hampitombo ny mpihaino anao. Ny mpamaky dia mikaroka indrindra amin'ny fotoanan'ny hetsika fa tsy aorian'izany.
Mitoraka bilaogy tsara. Tsy mila mijanona amin'ny lohahevitra foana amin'ny bilaoginao ianao. Aza adino, ny bilaogy dia resaka eo aminao sy ny mpamaky anao. Mahafantatra anao izy ireo ary manandrana hahafantatra azy ireo ianao. Sary vitsivitsy amin'ny fialan-tsasatrao na ny alikanao no hamela azy ireo hiditra ao amin'ny tontolonao lalina kokoa ary hamorona fifamatorana bebe kokoa amin'izy ireo. Matetika aho mandany fotoana isan'andro mieritreritra izay mety bilaogiko. Tsy andro iray no tsy ianarako zavatra, tsy andinihako zavatra, na henoko momba zavatra… noho izany dia tiako ny mampita izany amin'ny mpamaky ahy. Mahaiza miteny ary miresaka amin'izay tsara ataonao.
Ka izay no nianarako hatreto. Hanohy hanao fanitsiana amin'ny bilaogiko aho mba hampitomboana ny fampahafantarana sy hanatsarana ny kalitaon'ny lahatsoratro. Momba ny fanatsarana mitohy ny fanaovana bilaogy.
Manolotra soso-kevitra hamakiana ihany koa aho… ny tiako indrindra Resadresaka mitanjaka, saingy nahita lisitra lehibe iray amin'ireo boky fitorahana bilaogy hafa aho tamin'ny Converstations.
Fanavaozana: 17 Aogositra 2006 - Natolotra ho an'ny ProBlogger's Tetikasa fanoratana vondrona ho an'ny lisitra.
Tags: Analyticsfamolavolana bilaogyBilaogerafitorahana bilaogySokajyfanehoan-kevitrafahanahanombokainstapunditrohypermalinkspingsRSSSearch MarketingsidebarSitemapsfiarovana spamTagsTechnoratiTrackbacks
13 Aogositra 2006 amin'ny 8:00 PM
Lahatsoratra tsara Doug! Na dia mety ho toa adaladala aza izany dia manana olana amin'ny isa 3. Manana sary iray izay napetrako tao amin'ny pejiko About aho, saingy sarotra tamiko tokoa ny nanao izany. Matetika aho nametraka azy tao amin'ny bilaogiko mba hahatsiarovan'ny raiko avy hatrany ny antony nanoratany ny pejin-pejy - fa nahatonga ahy tsy mahazo aina izany! Mila mahazo sary hafa aho. Marina ny anao - mankasitraka sary foana aho - tiako ho fantatra hoe iza no iresahako! (BTW - sary tsara eo amin'ny lohanao izany!)
vaspers ny makarakara
14 Aogositra 2006 amin'ny 12:54 PM
Hadinonao ny lafiny lehibe sasany, izay homeko am-pifaliana izao mba hampanan-karena an'ity bilaogy mahafinaritra ity.
(1) Ny endrika no lafiny lehibe indrindra amin'ny tranokala rehetra araka ny filazan'ny Stanford Persuasive Tech sy BJ Fogg, PhD. Raha toa porny, amateur, ratsy tarehy, malama, mana-jaza, sns., Dia handoa vola afaka segondra ary tsy hiverina intsony ireo mpampiasa.
(2) Votoatiny manankarena, mahalana, mahasoa.
(3) Matt Mullenweg nilaza tamiko ny tena tsiambaratelony dia ny mifanerasera amin'ny tontolon'ny bilaogy, ny fanehoan-kevitra mifamaly, ny fandefasana hevitra amin'ny bilaogy hafa, ny fandefasana mailaka amin'ny bilaogera hafa miaraka amin'ny fampahalalana na torohevitra manan-danja, sns.
(4) Isan-karazany. Fahagaga tsy ampoizina. Fanandramana.
(5) Multi Media: podcast, embed video, sary, zavakanto, sarimiaina, sary, tabilao, sns.
(6) Valiny haingana amin'ireo fanehoan-kevitra napetraka tao amin'ny bilaoginao manokana, mifandraisa am-pahatsorana sy am-panajana amin'ireo mpamaky anao.
(7) Profile eo aloha na About Me, ary fampahalalana mialoha na fampahalalana mailaka.
(8) Lisitr'ireo “lahatsoratra malaza indrindra” na sokajy manaitaitra mahaliana hafa ao amin'ny baravarankely, miaraka amin'ireo Lahatsoratra farany sy Archive Monthly.
Soso-kevitra vitsivitsy fotsiny momba ny lafin-javatra izay heveriko fa tena ilaina.
11 Mey 2007 tamin'ny 3:47 hariva
Torohevitra tsara, misaotra. Niezaka ny handray ny torohevitrao momba ny # 7 sy hampiasa ny Google Analytics aho, saingy miaiky aho fa tsy azon'ireo mpampiasa teknika toa ahy tsy araky ny teknika. Ho an'ny fiainako dia tsy hitako izay hametrahana ny kaody izay lazain'izy ireo amiko fa tokony ampidiriko.
13 Feb 2007 tamin'ny 1:57 maraina
Salama Doug, efa nijanona indroa tao amin'ny tranokalanao aho ary tiako ny zavatra hitako ataonao. Nasongadinao ireo faritra mifandraika amin'izany izay manampy anay rehetra handinika ireo fitaovana ampiasainay amin'ny bilaoginay. Misaotra amin'ny torohevitra tsara.
13 Mey 2007 tamin'ny 12:09 hariva
Misaotra betsaka tamin'ny fanehoan-kevitra tsara nataonao, Robyn! Ary misaotra nitsidika !!!
Jun 7, 2007 ao amin'ny 10: 25 PM
Lahatsoratra tena tsara sy voasoratra. Garry no anarako ary manoratra amin'ny bilaogy manokana izay manome torohevitra mahomby amin'ny bilaogy ho an'ny mpamaky ahy aho. Izaho dia nitady zavatra hanoratako ao amin'ny Google ary hitako eto ny lahatsoratrao. Asa tena tsara ary azoko antoka fa hanome rohy amin'ity lahatsoratra ity amin'ny lahatsoratro manaraka. 🙂
8 Jun 2007 amin'ny 7:51 AM
Misaotra Garry! Hojereko tsy ho ela ny tranokalanao.
28 Nov 2007 tamin'ny 2:31 PM
Ie, bilaogy tena milay be ity. 😉
Vao nampiditra anao tamin'ny tiako aho.
26 Jul 2011 amin'ny 8:36 PM
Hevitra tsara izany, fantatro fotsiny fa misy fiatraikany lehibe amin'ny motera fikarohana ihany koa, noho ny torohevitra nomeny